UMikey Garcia ujongene noSandor Martin eFresno, e-USA nge-16 ka-Okthobha
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UGarcia noMartin, UMikey Garcia, USandor Martin	0
UMikey Garcia ngokuchasene noSandor Martin
Ipaki yaseChukchansi eFresno, California, USA 16/10/21
UMikey Garcia ubuyela esenzweni ngo-Okthobha 16 njengoko eqhubeka USandor Martin eChukchansi Park eFresno, eCalifornia, befaka ibhili ebekiweyo enezihloko ezibini zeLight-Flyweight World isihloko, bahlala kwihlabathi liphela kwiDAZN.
** AMATIKITI ATHENGISWA NGOMSO (SEPTEMBA 17) UKUYA KWI-11: XNUMX (PT) KWIITIKITI.COM **
Owayesakuba ngumlawuli wehlabathi onobunzima obune uGarcia (40-1 30 KOs) wagqibela ukungena ngeentambo ngoFebruwari 2020, ebeka u-Jessie Vargas kwiziko iFord kwiziko iThe Star eFrisco, eTexas, esendleleni eya kumanqaku aphumelele abanye abantu baseMexico- WaseMelika. Umntu oneminyaka engama-33 uceba indlela eya kwisihloko sehlabathi sozuko, kwaye abalandeli abathandayo baseCalifornia baceba ukubeka umboniso kwikhaya leFresno Grizzlies.
Ndonwabe kakhulu ukubuyela eringini kwaye ndinike abalandeli bam obunye ubusuku ukuba babukhumbule, utshilo uGarcia. “Ndijonge phambili ekuboneni wonke umntu nge-16 ka-Okthobha eFresno- izakuba bubusuku obumnandi bomdlalo wamanqindi.”
UMartin (38-2 13 KOs) unesimo kunye nomsebenzi awenzayo njengoko esenza amatyeli akhe aseMelika kumlo omkhulu wobomi bakhe. U-Spaniard urekhode isigqibo esiphumeleleyo ku-Kay Prospere kukhuseleko lwesibini lwe-European Super-Lightweight yakhe ngo-Epreli kwiyadi yakhe yase-Barcelona, ​​kwaye oneminyaka engama-28 uzakushiya yonke into eringi kwinto akholelwa ukuba inokuba bubusuku obutshintsha ubomi. .
"Ndichulumancile ngeli thuba," watsho uMartin. “Umdlalo wamanqindi undizisela ithuba lokutshintsha ubomi bam. Kuza kubakho ngaphambili nasemva kwawo wonke umntu kulo mlo. ”
Ikhadi elingaphantsi eligxunyekwe ukuxhasa umsitho ophambili likhokelwa yimilo emibini yeLight Light-Flyweight njengoko inkosi ye-WBO u-Elwin Soto ebeka isithsaba sakhe kumgca ngokuchasene noJonathan Gonzalez kunye neqela le-WBA u-Esteban Bermudez ekhusela umtya wakhe ngokuchasene noJese 'Bam' Rodriguez.
I-Soto (19-1 13 KOs) yonwabise isihlwele esasigcwele e-AT & T Stadium kwimpelaveki yaseCinco de Mayo, bemisa uKatsunari Takayama kumjikelo wesithoba wokungqubana kwabo kwikhadi elingaphantsi kwenkwenkwana kaSoto yaseMexico uCanelo Alvarez owayengqubana noBilly Joe Saunders. Oko yayikukuzikhusela okwesithathu okuphumeleleyo kwiminyaka engama-25 ubudala kwaye owokuqala ngaphakathi kumgama webhanti awukrazula u-Angel Acosta ngomjikelo wokugqibela we-KO ngaphezulu kwePuerto Rican ngoJuni 2019, kwaye wenza ukuzikhusela kwakhe kwesine ngo-Okthobha 16 ngokuchasene neGonzalez kwi-bout ngokudibana neZanfer Promotions.
Olunye utshaba lwasePuerto Rican kwindlela kaSoto eFresno ngohlobo lomceli mngeni uGonzalez (22-3-1 13 KOs). Umdala oneminyaka engama-30 ukwisihloko sakhe sesibini sehlabathi esijikelezayo esiya eJapan ngo-Agasti 2019 esiya kujongana nenkosi ye-WBO Flyweight uKosei Tanaka kwaye umlingisi ophumeleleyo wafika kwi-WBO NABO ibhanti eLight-Fly ngoFebruwari 2020 wayikhusela ngomjikelo wesine we-KO U-Armando Torres ngoMeyi uzokufumana imeko yakhe esisinyanzelo.
“Andinakulinda ukubuyela eringini ndikhusele isihloko sam,” utshilo uSoto. “ITexas ibubusuku obumnandi kwaye ndicinga ukuba obu buya kuba njalo. UGonzalez ngumdlali oqhoshayo wasePuerto Rican, kwaye sonke siyazi ukuba xa iMexico nePuerto Rico bengena ngeentambo, kukho izinto ezenziwa ngomlilo, ke abalandeli baya kuwuthanda lo mlo.
“Kudala ndililindile eli thuba,” utshilo uGonzalez. “Uhlobo lweSoto luyandifanela. Izakuba yimfazwe yasePuerto Rico idlala neMexico. ”
I-Bermudez (14-3-2 10 KOs) yaqhekeza umtya we-WBA kuCarlos Canizales ngoMeyi, ukumisa intshatsheli ekhuselayo eMexico City ngaphakathi kwimijikelo emithandathu kwinto yokuqala eyayisilwa nesihloko saseMexico. Uneminyaka engama-25 ubudala ujongene novavanyo olunzima kukhuseleko lokuqala lwesithsaba sakhe ngokuchasene nokunyuka kwetalente yaseTexas uRodriguez.
URodriguez (13-0 9 KOs) yenye yeenkwenkwezi eziqaqambileyo zamanqindi aseMelika, kwaye u-21 oneminyaka engama-XNUMX ubudala u-Texan ufumana isihloko sakhe sokuqala sehlabathi eFresno. Uqeqeshwe nguRobert Garcia, uRodriguez uzimisele ukulinganisa intshatsheli yakhe ye-WBA World Super-Flyweight umzalwana uJoshua Franco kwaye abuyise izixhobo ezingaphezulu eSan Antonio.
"Lo iza kuba ngumlo omkhulu," utshilo uBermudez. “UJese yintshatsheli yomlobi onetalente, kwaye ndiqinisekile ukuba uzobonakala ekwimeko entle kwaye ukulungele ukuzanyazanyiswa nge-16 ka-Okthobha, kodwa ndisebenze nzima kakhulu ukuba yintshatsheli yeHlabathi ukuyivumela ukuba iqhubeke ukuzikhusela kwam okokuqala, ke le izakuba emfazweni. ”
“Eli lithuba ebendililindele ubomi bam bonke,” utshilo uRodriguez. “Okokuqala ndifuna ukubulela wonke umntu eMatchroom, uRobert noMikey Garcia, uMnu. Honda, utata wam kunye nawo wonke umntu eRGBA ngokundixhasa ukusukela ngala mhla wokuqala. Ndifuna nokubulela iBermudez ngokundinika ithuba lokulwela isihloko sayo.
“Ndiyazi ukuba ayizukuba ngumlo olula, kodwa ndiceba ukuphuma eringini ngo-Okthobha u-16 njengentshatsheli entsha yeHlabathi kwaye ndizise intshinga ekhaya eSan Antonio. Iya kuba yimbeko kum kunye nomntakwethu uJoshua ukuba ziintshatsheli zeHlabathi ngaxeshanye. Ndiziqeqesha kakhulu kwaye ndiyathembisa ukuba andizukuphoxa mntu. ”
"Ndikulangazelele kakhulu ukubuyela eMelika ndinekhadi lokuqhekeka eFresno," utshilo umgqugquzeli u-Eddie Hearn. “Kumnandi ukubona uMikey ebuyile eringini, iholo lodumo elizayo elihlala lisenza imilo eyonwabisayo kwaye izingela ithagethi yakhe elandelayo yeLizwe- kodwa eli lithuba elihle kuSandor nelinye azimisele ukulithatha. zozibini izandla.
“Sineemfazwe ezibini ezithandekayo kumlo wehlabathi kwicandelo leLight-Flyweight elihlala linomdla neentshatsheli ze-WBO u-Elwin Soto kunye neentshatsheli ze-WBA u-Esteban Bermudez bebeka amabhanti abo kumgca ngokuchasene noJonathan Gonzalez noJesse 'Bam' Rodriguez ngokwahlukeneyo - abalandeli beFresno balwela eyona nyhweba ngo-Okthobha 16. ”
"Kulilungelo ukusebenza noMatchroom kunye noMikey Garcia ngobu busuku," utshilo umgqugquzeli uRick Mirigian, osebenza neMatchroom kulo msitho. “Umhla we-16 ku-Okthobha uyakuba bubusuku kungekho mntu uza kulibala apha eFresno; Ndiyakuthembisa. ”
Imilo engaphaya yamakhadi amancinci iya kubhengezwa ngaphambi kwangomso kwintengiso yokwazisa.
UDillian Whyte wadibana no-Otto Wallin waseSweden eLondon nge-30 ka-Okthobha	U-Khasan Baysanguroz ujongene noChristopher Ousley nge-25 kaSeptemba